Burma Partnership » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
By Human Rights Educators Network • December 9, 2015
၂၀၁၅ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ဆောင်ပုဒ်သည် “Our Rights, our freedoms, Always!” အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ ထာဝရအတွက်ပါ” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ပုဒ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံမူဝါဒ များနှင့် အထူးကိုက်ညီလှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်မှန်ပြည့်ဝသည့် လူ့အခွင့်အရေးကို ရရှိခံစား နိုင်ရန်အတွက် လူသားတိုင်းသည် အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်မှုများကို ဟန်ချက်ညီညီ ရရှိ ခံစားနိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခွင့်အရေးများရရှိပြီး လွတ်လပ်မှုမရှိလျှင် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိသည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ထို့အတူ လွတ်လပ်မှုရှိသော်လည်း အခွင့်အရေးမရှိပါက ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ဘ၀ကို ဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် ။ ။ ဦးအောင်မျိုးမင်း (09 448015306 – myominburma@gmail.com) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
The theme of 2015 International Human Rights Day is, “Our Rights, our freedoms, Always!” and this corresponds to the human rights policies in the Universal Declaration of Human Rights. In order to enjoy genuine human rights, everyone needs balanced rights and freedom. Rights without freedom cannot be pronounced as human rights and freedom without rights will not yield lives with dignity.
For more information, please contact U Aung Myo Min (09 448015306 – myominburma@gmail.com)
Tags: ASEAN, Freedom of Assembly, Freedom of Association, Freedom of Expression, Human Rights, Human Rights Educators Network, International Human Rights Day